Lo mhlaba awuthengiswa-iGeofumadas
NgoDisemba, 2017 cadastre
Eli linqaku elinomdla nguFrank Pichel, apho ahlalutya ixabiso elongeziweyo lokhuseleko olusemthethweni olusetyenziselwa ukuthengiswa kwezindlu. Umbuzo wokuqala unomdla kwaye uyinyani; Indikhumbuza ngotyelelo lwam lwakutsha nje kwindawo yokuhlala yaseGranada eNicaragua, apho indlu entle yobukoloniyali inegrafiti "ipropathi engquzulanayo, musa ukuthenga ingxaki", kwaye ecaleni kwayo indlu elandelayo enemikhonto kwindlu elandelayo isithi "amasela , baphange indlu yam ».
Inqaku ekugqibeleni libhekisela kwiseshenyuliso esicatshulwayo apho izinga lekhuseleko lepropati yethu lingalinganiswa.
Ngaba ufuna ukuthengisa impahla yakho ngaphakathi koqoqosho oluphuhlisiweyo?
Faka uphawu lokuthengisa.
Ngaba ufuna ukugcina ipropati yakho kuqoqosho olusakhulayo?
Beka u-THA uphawu lokuthengisa.
Iipowusta ezibonisa ukungabonakaliswa komhlaba zanda kakhulu nangaphezulu kwilizwe elivela eNigeria ukuya eTanzania.
Ibalaselisa imfuno yokukhula komhlaba wonke kwiAfrika kunye neendlela ezikhuselekileyo okanye ezingasebenziyo zolawulo lomhlaba eziqhubekayo ekunciphiseni ukhuseleko kunye nokukhula koqoqosho.
Umhlaba uhlala useyona nto ibaluleke kakhulu kunye neyona nto incinci kwi-Afrika. I-Bhanki yehlabathi iqikelela ukuba i-90 ipesenti yomhlaba e-Afrika ayikhombiswanga. Kwaye amaninzi amabhinqa namadoda aseAfrika axhomekeke kweli lizwe, apho abanalo ilungelo elikhuselekileyo, ngenxa yezindlu zabo kunye neendlela zokuhlala.
Ukungabikho kwamaxwebhu amalungelo omhlaba - kwakunye amaxwebhu enobuqhophololo kaninzi mandrax iinkqubo ezingasebenzi kakuhle ilizwe - kuthetha ukuba abantu bathenge umhlaba umntu ongelilo umniniyo kunjalo ngamanye amaxesha. Kudla akukho mhlaba oluhlaziweyo okanye oluntu ngumniki i ubhaliso-arhente karhulumente, nto leyo eshiya nawuphi umthengi onomdla ngaphandle indlela ukuqinisekisa ukuba thethana ukuthengwa wepropati kunye nabantu ngokwenene ilifa. Ngoko ke, abantu abanomhlaba ngamanye amaxesha bajongene nabatyala-mali abaye bahlawula imali eninzi yokuthenga umhlaba wabo kumntu ongenamalungelo epropati. Oku ingakumbi yingxaki ukuba amaqela ahlelelekileyo, ingakumbi abasetyhini, ngubani ngokuqhelekileyo abanalo amaxwebhu asemthethweni amalungelo abo umhlaba, ukuba abahlolokazi baye bafumanise abanye abathi ubunini esemthethweni yelizwe ahlala kuyo okanye baxhaphaza.
Ukuqaphela okukhulayo indima osisiseko amalungelo omhlaba kuphuhliso oluzinzileyo wenza oorhulumente zijongene lo mngeni kunye eLiberia, Ghana kunye Uganda, bonke abasebenza ekuphuhliseni inkqubo amalungelo omhlaba.
veki iphelileyo, uMongameli eLiberia, uEllen Johnson Sirleaf waxelela iforam ye-African Green Revolution ukuba kwilizwekazi babehlala sehlelwa yindlala nayindlala, ade amazwe ukubonelela amafama amancinci ukhuseleko kunye nethuba kufuneka ukutyalomali kumazwe abo nokuphucula izivuno zabo ngokuqinisa amalungelo kumazwe abo.
Ngoku, olwenziwa entsha interactive inceda ukuqaqambisa le ngxaki kunye nefuthe amalungelo omhlaba ngaphandle ukhuseleko kwi yolondolozo, ukhuseleko, ukupheliswa kwendlala kunye nokuxhotyiswa kwezoqoqosho kwabasetyhini Afrika nangaphaya.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-TopView-Isicelo sophando kunye nokuma komhlaba
Post Next Iikholeji ze-QGIS eziphambili kwiSpeyinOkulandelayo »